Warshadda Turner Turner | Soosaarayaasha Shiinaha Compost Turner, Alaab-qeybiyeyaal
Qalabka isugeynta nooca forklift waa qalab cusub oo keydinta iyo qalabka lagama maarmaanka u ah soo saarista bacriminta organic & compound. Waxay leedahay faa'iidooyinka waxtarka sare ee burburka, xitaa isku dhafka, isku dhejinta si buuxda iyo masaafada dheer ee socodka, iwm.
Ku Mashiinka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Haydarooliga loo isticmaalo halsano ee wasakhda dabiiciga sida xoolaha iyo digada digaaga, qashinka dhoobada, dhoobada warshadda sokorta, doolshaha keegga doogga iyo balka cawska. Qalabkani wuxuu qaataa nooca jeexdin ee caanka ah ee tikniyoolajiyadda aerobic-ka ee joogtada ah, wuxuu ka dhigay qashinka dabiiciga ah inuu si dhakhso leh u fuuqbaxay, la nadiifiyay, loo nadiifiyey, u rumeeyey ujeedka aan waxyeellada lahayn, dib-u-warshadaynta qashinka iyo yareynta ka-shaqeynta, isticmaalka tamarta oo hooseeya iyo tayada wax soo saarka oo deggan.
Mashiinka Turner Mashiinka Nadiifinta Naafada waa qalab isdaba-marin iyo otomatig si otomaatik ah leh qoto dheer iyo qoto dheer xoolaha digada, dhoobada iyo qashinka, dhoobada sifeynta, keegga digaagga oo liita iyo balka cawska ee miraha sonkorta, iyo sidoo kale waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa khamiirinta iyo fuuqbaxa dhirta bacriminta dabiiciga ah, dhirta bacriminta isku dhafka ah. , warshadaha qashinka iyo qashinka, beeraha beerta iyo dhirta loo yaqaan 'bismuth'.
Ku Double Ku marooji Composting Turner waxaa loo isticmaalaa khamiirka digada xoolaha, qashinka dhoobada, dhoobada shaandhada, haraaga, hadhaaga dawada, cawska, balka iyo waxyaalaha kale ee dabiiciga ah, waxaana loo isticmaalaa khamiirka hawada.
Naqshadeynta cusub Qashinka & Bacriminta Khamiirinta Isku Darka Haanta waxaa loo isticmaalaa kuleylka aerobic-ka kuleylka aerobic iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad bayooloji ah, iyadoo la isticmaalayo tamar yar iyo qarash yar oo lagu shaqeynayo.
Nooca 'Groove Type Composting Turner' Mashiin waxaa loo isticmaalaa khamiirka qashinka dabiiciga ah sida xoolaha iyo digada digaaga, wasakhda wasakhda, dhoobada dhirta sonkorta, wasakhda iyo balka cawska. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhirta bacriminta dabiiciga ah iyo dhirta bacriminta isku dhafka ah ee kuleylka aerobic.
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida ah waa mashiinka xirfada u leh bacriminta digada iyo bacriminta qalabka kale ee dabiiciga ah. Waxay qaadataa nidaam casri ah oo qalliinka ku shaqeeya, jihada hawlgalka isteerinka awoodda iyo farsamaynta nooca guurguuraha ah.